Alto's Adventure 1.7.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.7.2 လြန္ခဲ့ေသာ 10 မိနစ္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Alto's Adventure
Alto's Adventure ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သူတို့တစ်ဦးအဆုံးမဲ့စနိုးဘုတ်စီးခြင်း Odyssey အပေါ်စတင်အဖြစ် Alto နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများက Join ။ အိမ်နီးချင်းကျေးရွာများ, ရှေးသစ်တောများနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာစွန့်ပစ်အပျက်အယွင်းမှတဆင့်သူတို့၏ဇာတိတောလှပသောအယ်လ်ပိုင်းတောင်ကုန်းကိုဖြတ်ပြီးခရီး။
လမ်းတစ်လျှောက်, သင်သည်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ llamas ကယ်တင်ရန်ရရှိနိုင်ရန်အိမ်ခေါင်မိုးကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်, ကြောက်စရာတွင်းနက်ကျော်ခုန်နှင့်တောင်တော်အကွီးအကဲမြား outwit လိမ့်မယ် - တောင်တော်အပေါ်သို့ကာလ၏အစဉ်အဆက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒြပ်စင်များနှင့်ကျမ်းပိုဒ် braving အားလုံးနေစဉ်။
•, အရည်ယဉ်နဲ့ပါးရူပဗေဒ-based ဂိမ်း
•အပြည့်အပြောင်းလဲနေသောအလင်းရောင်နှင့်ရာသီဥတုသက်ရောက်မှုများ, မိုးကြိုးမုန်တိုင်း, Blizzard, မြူ, Rainbow, သေနတ်ပစ်ကြယ်နှင့်ပိုပြီးအပါအဝင်
ရမှတ်နှင့်မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့• Chain အတူတူ combo
• 180 handcrafted ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်အတူသင့်ကျွမ်းကျင်မှုစုံစမ်း
• Discover ခြောက်ခုထူးခြားသောနှင်းလျှောဘုတ်ပြား, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အထူး Attribute တွေနှင့်အရည်အချင်းများနှင့်အတူအသီးအသီး
•သင့်မိတ်ဆွေတွေကိုစိန်ခေါ်မယ်။ အကောင်းဆုံးမြင့်မားရမှတ်, အကောင်းဆုံးအကွာအဝေးနှင့်အကောင်းဆုံးလှည့်ကွက် combo များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်!
•တစ်ဦးလုံးဝအသစ်ဂိမ်းမှာ dynamic ဘို့ Izel ရဲ့အလုပ်ရုံကနေ wingsuit ကိုဆညျးပူး
•လှပရိုးရှင်းသောနှင့် evocative အမြင်ဒီဇိုင်း
တစ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်နက်ရှိုင်းအတွေ့အကြုံအတွက်•မူရင်းသီချင်းနှင့် handcrafted အသံ (နားကြပ်အကြံပြု!)
"2015 ခုနှစ်အကောင်းဆုံး Looking ဗီဒီယိုဂိမ်းများ"
Alto's Adventure အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Alto's Adventure အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Alto's Adventure အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Alto's Adventure အား အခ်က္ျပပါ
snah စတိုး 42.02k 12.23M
Alto's Adventure ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Alto's Adventure အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Noodlecake Studios Inc
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.noodlecake.com/privacy-policy/
လက်မှတ် SHA1: A1:EF:4A:2C:82:95:FE:CB:5E:90:2C:37:A6:74:8B:75:D8:61:01:8A
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Jordan Schidlowsky
အဖွဲ့အစည်း (O): Noodlecake Studios Inc
နယ်မြေ (L): Saskatoon
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): SK
Alto's Adventure APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ